Soomaalida Kenya oo wali wada u gurmashada dadkii masiibadu ku habsatay Mogadishu – XOGMAAL.COM
Soomaalida Kenya oo wali wada u gurmashada dadkii masiibadu ku habsatay Mogadishu
Laba boqol iyo konton kun oo doolarka Maraykanka ayaa soo xarootay kadib xaflad dhaqaale uruurin oo Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi ay u qabteen sidii gargaar loogu uruurin lahaa dadkii ku waxyeeloobay qarixii Muqdisho ka dhacay 14kii Oktoobar.
Xafladan oo uu garwadeen ka ahaa hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka Kenya, mudane Aadan Bare Ducaale ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaano iyo masuuliyiin kale oo ka socday dhinaca dawladda Kenya, ganacsato Soomaaliyeed iyo gudiga gurmadka oo ka kooban 11 xubnood kuwaasi oo uu gudoomiye u yahay Sh. Maxamed Cabdi Umal.
Wali lama shaacin dhaqaalaha guud ee ay soo xareeyeen walaalaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan Kenya, waxaase hubaal ah inay si damiir ehelnimo iyo walaalnimo ku dheehan tahay uga damqadeen masiibadii ka dhacday Xamar. Waxaa xusid mudan in magaalada Gaasisa iyo xaafadda Eastliegh looga shubay dhiig dadkii ay soo gaareen dhaawacyadu.
Xildhibaan Aadan Bare ayaa intii ay socotay yabooha dhaqaale uruurinta wuxuu kaligii ku deeqay toban kun oo doolar.
Caleemo saarka Waare oo isu geeyay rag kala irdhaysan
RW. Khayre oo si degan uga hadlay xiisada u dhaxeysa Dowlada Federaalka iyo madaxda maamul Goboleedyada
Taliye Fahad Yaasiin oo hub, Ciidan iyo gaadiid ku wareejiyay Booliska.
Ciidamada Barma oo qaabab kala duwan u adeegsaday xasuuqa Rohingya
Madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo Amray laamihiisa ammaanka
Guddoomiye Yariisoow oo sheegay madax iyo siyaasiyiin ku howlan sii deynta dadkii…
Taliye Fahad Yaasiin oo hub, Ciidan iyo gaadiid ku wareejiyay…
Ciidamada Barma oo qaabab kala duwan u adeegsaday xasuuqa…
Guddoomiye Yariisoow oo sheegay madax iyo siyaasiyiin ku howlan…
Sharci cabsi ku abuuray soo galootiga oo Talyaaniga uu meel…
Dabeylaha ku dhuftay waqooyiga America iyo sida ay u saameeyeen…
Guddoomiye Yariisoow oo sheegay madax iyo siyaasiyiin ku howlan sii deynta dadkii Axmed Dowlo nolosha ku gubay